Soosaarayaasha budada ah ee loo yaqaan 'Testosterone phenylpropionate budada' iyo Warshadaha - Warshadda
Qaybta tixraaca falanqaynta ee loo yaqaan 'stabiyo anabolic androgenic steroid,' phenylpropionate Testosterone '' 'waa baaritaan tixraac ah oo loo yaqaan' staboid anabolic androgenic '. Waxyaabahaas waxaa loogu talagalay cilmi baarista iyo codsiyada raadinta.
Raw Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8) fiidiyow
Budada Raw Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8) Sharraxaadda
Budada Raw Testosterone phenylpropionate budada ah waa isugeynta anabolic-androgenic steroid (AAS) iyo androgen ester - gaar ahaan, C17β phenylpropionate ester of testosterone - oo horey loogu suuq galiyay Romania.
Daawadan waxaa loo isticmaalaa ragga oo aan ku filneyn walxo dabiici ah oo loo yaqaan 'testosterone'. Ragga, testosterone waxay mas'uul ka tahay hawlo badan oo caadi ah, oo ay ku jiraan koritaanka iyo horumarinta xubnaha taranka, muruqyada, iyo lafaha. Waxa kale oo ay ka caawineysaa inay sameeyaan horumarinta galmada caadiga ah (qaangaarnimada) wiilasha. Testosterone waxay ka tirsan tahay daroogada daroogada loo yaqaanno androgens. Waxay u shaqeysaa iyada oo saameeysa habab badan oo jirka ah si jidhku u kobciyo oo u shaqeeyo si caadi ah.
Testosterone waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa wiilasha qaangaarka ah si ay u keenaan qaangaadhnimada kuwa leh qaangaarka daahsoon. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo noocyada kansarka naasaha ee dumarka qaarkood.
Budada Raw Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8) Smamnuucista
Product Name Budada budada ah ee loo yaqaan 'Raw Testosterone phenylpropionate budada'
Magaca Kiimikada Dibudhisid; Testosterone 17-phenylpropionate; Testosterone hydrocinnamate; Fikradaha imtixaanka
brand NAme Tijaabada
Maamulka Khatumo State Key HHSXYDOROIURIP-FEZCWRLCSA-N
Molecular Wsideed 420.593 g / mol
barafku Psaliid 115-116 ℃
Codsiga An Androgen, dhiska jirka
Waa maxay budada Raad Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8)?
Daawada phenylpropionate testosterone waa mid ka mid ah maaddooyinka loo isticmaalo daroogada loo yaqaan "Sustanon", oo ka kooban afar xeryood oo tijaabo ah (testosterone phenylpropionate, testosterone propionate, testosterone isocaproate and testosterone decanoate) heerar badan oo ah heerarka testosterone oo dheecaan ah. Isku daridda daroogada waxaa loo isticmaalaa daaweynta beddelidda testosterone ee ragga oo leh xaalado la xidhiidha hypogonadism-ka koowaad iyo midka labaad, ama midka loo yaqaan 'birth or acquir' waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa daaweyn taageero ah oo loogu talagalay gabdhaha-u-dheddig-lableedka.
Sidee Raw Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8)
Testosterone Phenylpropionate budada waa baaritaan degdeg ah oo lagu sii daayo testosterone, taasoo keenta heerarka hormoonka ee lagu qiimeeyo heerarka hormoonada oo si deg deg ah u kordhaya xajmiga murqaha iyo xoogga, laakiin hoos u dhaca ayaa ah in muruqyada degdega ah ay ka baxaan dhawr toddobaad ka dib marka daawada la joojiyo.
Kadib qaadashada tijaabada Phenylpropionate, waxaa loo bedeli karaa estrogen iyo sidoo kale Dihydrototestosterone (DHT). Qalitaanka tijaabada Phenylpropionate waxay ku dadaaleysaa natiijada iyada oo dhiirigelinaysa sii-haynta kordhinta nitrogen ee muruqa. Testosterone Phenylpropionate ayaa sidoo kale kor u qaadeysa heerka cabbirka koritaanka IGF-1 ee maskaxda iyo beerka. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo uu leeyahay awood u leh inuu kor u qaado dhaqdhaqaaqa unugyada dayax gacmeedka kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara wax ka bedelidda muruqa dhaawacmay.
Qalitaanka tijaabada ah Phenylpropionate waxay ku xidhan tahay qolka xajinta (androgen receptor) (AR) waxayna bilaabi kartaa gawaarida hiddaha si ay u qaadato farriinteeda. Kicinta xayawaanka ee Androgen (AR) waxay dhiirigelinaysaa dhawr arimood oo AR ku tiirsan labada muruq ee labadaba marka lagu daro luminta fatu. Testosterone Phenylpropionate waxay sidoo kale hoos u dhigtaa hormoonka glucocorticoid hormoonka waxayna kordhisaa unugyada dhiigga cas.
Marka baaritaanka Phenylpropionate uu isbeddelayo estrogen, wuxuu keenaa noocyo badan oo culus oo waxyeelo soo gaara oo ay ka mid yihiin gynocomastia, haynta biyaha, halka DHT badanaa ka dambeeya timo luminta, lalabada iyo korriinka qanjirada. Kharashka baaritaanka Phenylpropionate wuu hooseeyaa sababtoo ah dib-u-dhac ku yimid suuqa madow, iyo helitaanka sare. Testosterone Phenylpropionate ayaa sii kordheysa caan ka ah maalmaha soo socda.
Budada Raw Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8) Qiyaasta
Inta badan jirka / cayaartoyda waxay maamulaan phenyl testosterone propionate laba jeer toddobaadkii ama laba maalmood oo kale. Qiyaasta la doorbidaa ee ragga waa 300mg- 3000mg / usbuuc. Ciyaartoyda dumarka ah laguma talinayo in ay isticmaalaan daroogada sababtoo ah saameynaha kale ee dhici kara.
Dhibaatooyinka soo raaca ee propionate phenyl propionate testosterone waxay ka yar tahay dhammaan qiyaasaha testosterone, waxaa ku jira qaar ka mid ah: fuuq-baxa, timaha jidhka / wajiga.
Budada Raashinka Testosterone phenylpropionate budada (1255-49-8) faa'iidooyinka
Daawada kore ee testosteronephenyl propionate waa daawo ka mid ah darajada asrogens ee daroogooyinka. Waa mid ka mid ah qaybaha Sustanon iyo Omnadren. Daawada kaniiniga phenyl propionate testosterone ayaa loo heli karaa maamulka sida cirbadeynta. Cirbadku wuxuu leeyahay nolol firfircoon afar illaa shan maalmood. Waxaa loo isticmaali karaa kali ama iyadoo la jaangooyeyaal kale oo loogu talagalay in lagu bedelo daweynta oo loo yaqaan 'androgen therapy' ee ragga oo leh xaqiijin la'aanta testosterone. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka ugu caansan waa in la kordhiyo tirada murqaha iyo xoogga leh. Ciladda wanaagsan ee jir-dhiseyaashu waa inay ogyihiin waxyaabahan waxa weeye in saameynta dhinaca cayayaanka ee sida biyaha lagu hayo ay u muuqato mid aad u dhif. Sidoo kale adigoo qaadanaya farsamoyaqaannada farsamada gacanta ee loo yaqaan 'testosterone phenylpropionate' waxay soo sheegaan kororka cuntada, gardarrada iyo xoogga. Guud ahaan adoo isticmaalaya noocyadan testosterone sida saxda ah saameyntu waxay la mid yihiin qiyaasaha kale ee testosterone laakiin uma baahna duritaanno aad u fara badan, mana keeno sii-haynta biyaha.
Tallaabada guud ee daroogadu waxay kor u qaadaysaa fayoobaanta iyada oo loo marayo libido, difaac, tamar, kordhinta muruqyada iyo kordhinta baruurta. Laguma talin in la isticmaalo qiyaasta sare ee propionate phenylene testosterone sababtoo ah saameynta iyo saameynta sare ee daroogada. Saameynaha asaasiga / anabolic ee daroogada waxay ku xiran tahay qiyaasta la qaato. Ciyaaraha waxay tixgelinayaan in sare u qaadista qiyaasta, natiijooyinka ka fiican, laakiin qiyaasta sare waxay muujinaysaa halis badan oo la xidhiidha saameynta taban ee beerka. Badeecada phenyl propionate testosterone waxaa loo tixgeliyaa in ay keento natiijooyin wanaagsan oo kordhiya heerarka testosterone, hela xoog iyo xajmiga murqaha. Sababtoo ah kicinta xuubka Androgen, daawada powder propionate testosterone ayaa keeni karta murqo kacsan, kordhinta baruurta, hagaajinta murqaha iyo koritaanka. Tan iyo markii jidhku kobciyo miisaanka musqulaha ee xawaare sare leh, cunto badan ayaa la gashaa si toos ah loogu diraa unugyada muruqa. Waa saameyn aan toos ahayn ee testosterone ku saabsan luminta luminta.
Soo iibso budada Testosterone phenylpropionate laga bilaabo Buyaas.com